Soo ogow dukaanka tattoo-ka ugu da'da weyn adduunka, ma qiyaasi kartaa inta ay ganacsi ku jirtay? | Tattoo
Soo ogow dukaanka tattoo-ka ugu da'da weyn adduunka, ma qiyaasi kartaa inta ay shaqeyneysay?
Weligaa ma isweydiisay waa maxay dukaanka tattoo ugu da'da weyn adduunka? Mid ayaa laga yaabaa inuu ka fekero boos hore oo ka mid ah Boolisiya, laga yaabee qarnigii sagaal iyo tobnaad, laga soo qaaday aabbe ilaa wiil, oo loogu talagalay farshaxanka quruxda badan ee Tattoo dhaqameed...
Laakiin sidaas ma ahan. Jawaabtu waad yaabaysaa. Sii wad akhriska si aad waxbadan uga ogaato!
1 Xusuus-qorka asalka iyo nolosha oo dhan
2 Tattoos shalay iyo maanta
3 Meel yar oo ku taal Calle San Jorge
4 Qaws murugo leh
5 Dhamaad? ku faraxsan qoys u heellan fankooda
Xusuus-qorka asalka iyo nolosha oo dhan
Inbadan, sanado badan kahor, in kabadan toddoba boqolin Jerusalén weli ma jirin kaararka boostada iyo xajka kuwaasoo u socday hawlahooda xajka jidadka kulul iyo boodhka badan ee caasimadda waxay ahayd inay qaataan nooc kale Waan xasuustaa ilaa guriga.
Maxay xujaajtu u doorteen inay qaataan asalkaan xusuusado maqaarkaaga ah way ka yaabi yahiin sida ay u muuqato. The Masiixiyiinta way qaadi jireen tattoos iskutallaabta iyo magaca Masiixa si loo aqoonsado. Markii uu yimid dadka soo booqda ilaa dhulka barakaysan, tani waxay noqotay xitaa wax caadi ah oo dadka safraya waxay bilaabeen inay is calaamadeeyaan si ay u xasuustaan ​​marinka ay u soo mareen dhulkaas iyo dalkooda diinta u heellan.
Tattoos shalay iyo maanta
Yeruusaalem, waa magaalada ay ku taal dukaanka ugu da'da weyn adduunka ee ku yaal tatuuga.
Sababtoo ah Dalxiiska diinta ee Quduscaadiga boqolaal sano, ka naqshadaha ugu caansan Waxbadan iskama badalin tan iyo markaas. The Yeruusaalem iskutallaabta, sawiro kiristaan o xigashooyinka latin waa qaar ka mid ah qaybaha aadka loo dalbado.
In kastoo hadda qalab in la isticmaalay ayaa ah mashiinada tattoo, waagii hore howshu wax uun bay ahayd shaqo badan. Qoraal waqtiga nidaamkaan lagu sharaxay; taas oo aan ku ogahay soosaaray naqshadda oo rabay inuu ku sawiro a caaryada alwaax iyo dhuxusha meesha la rabo. Markaas ayuu farshaxanka tattoo, iyadoo la kaashanayo a irbad oo had iyo jeer lagu rusheeyo khad, Waxaan qeexay sawirka. Ugu dambeyntii, gabalku wuu dhammaaday jeermiska ku disha.
Meel yar oo ku taal Calle San Jorge
Gudaha tukaanka ugu da'da weyn adduunka ee ugu da'da weyn (Fuente).
Waana halkaan halka Qoyska Razzouk ficil gal. Afar fac ka hor reerka ayaa degay Jerusalén, inkasta oo uu inbadan sawiranayay: isagu awooweyaal waxay ku barteen farshaxanka sawirka Masar waligoodna waxay la xiriiraan kaniisada.
La Familia go'aansaday inuu dego a yar oo maxalli ah luuq cidhiidhi ah oo qabow, kuna dhow xarunta, laakiin xasilloon, oo hadda si sharaf leh u cayaara a kartel iyagoo muujinaya in ka badan toddoba boqol oo sano oo taariikh ah.
Qaws murugo leh
Nasiib darrose, badhtamihii qarnigii labaatanaad, intii lagu jiray dagaal Carab-Israa’iil, ayaa Qoyska Razzouk lahaa inuu u cararo Jordan iyo farshaxanka tattoos loogu talagalay xajka lumiyay caan. Markay soo laabteen, qoysku waxay ku guuleysteen inay dayactiraan dukaanka tattoo duulayay dhowr qarni, laakiin waxay umuuqatay in midkoodna milkiilaha caruurtiisu aysan daryeeleynin ganacsiga qoyska.
Laakiin markaa mid ka mid ah wiilasha reerka, Wassim, wax walba way bedeshay. Isaga Xaraaradda mootooyinka u horseeday inuu xiiseeyo xaraashka iyo dhaqankii hore reerkiisa. Nasiib wanaag wuu go’aansaday la wareego dukaanka.
Dhamaad? ku faraxsan qoys u heellan fankooda
Tan iyo markaas, Wassim aabihiis Wuu ka fariistay wiilkiisuna wuxuu daryeelay bakhaarka xaaskiisa oo iyaduna aad u jecel xaraashka. Labaduba waxay barteen farsamooyin cusub y waxay casriyeeyeen bakhaarka, iyo sidoo kale kan naqshado iyo qalab, sidaa darteed dhaqanka sii noolow iyada oo loo marayo casriga.
Tani Familia Marka si gaar ah looma hubo inay caruurteedu rabaan inay ku sii wadaan meheradda oo waxay yiraahdaan kuma cadaadineyno. Laakiin iyagu kama baqayaan mustaqbalkooda, maxaa yeelay waxay ku qanacsan yihiin in dhaqanka iyo tahay Way u yeeri doonaan, sidii ay waagii hore ugu yeeri jireen Wassim.
Sida aad arki karto, taariikhda dukaanka tattoo ugu da'da weyn adduunka Waa wax lagu farxo. Adigana, weligaa ma booqatay Inz Razzouk? Ma waxaad iga filaysay inaan wax badan haysto sheeko? La wadaag ra'yi faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Soo ogow dukaanka tattoo-ka ugu da'da weyn adduunka, ma qiyaasi kartaa inta ay shaqeyneysay?
Tattoo-ga qoraalka nooca: ururinta naqshadaha
Tattoo Dragonfly: ururinta iyo macnaha